Shesha I-WordPress ene-Amazon ne-W3 Ingqolobane Yonke | Martech Zone
ULwesibili, April 19, 2011 Lwesine, Disemba 1, 2011 Douglas Karr
Qaphela: Selokhu sabhala lokhu, selokhu sathuthela ku- WPEngine nge Ukunikezwa kwenethiwekhi yokuqukethwe inikwa amandla yi-StackPath CDN, i-CDN eshesha kakhulu kune-Amazon.
Uma uke walandela ibhulogi isikhashana, uyazi ukuthi ngilwe ne-WordPress. Ngaphandle kwebhokisi, i-WordPress uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe okusheshayo. Kodwa-ke, uma usenze ngokwezifiso ngokuphelele isiza futhi usitholela lapho usidinga khona kubasebenzisi, imvamisa iyinja. Izikhathi zethu zokulayisha ikhasi kuthempulethi entsha bezingaphezulu kwemizuzwana eyi-10 - ukusebenza okwesabekayo, nokwesabekayo.
Senze izinto eziningi ukusiza ukusheshisa i-WordPress:
Sithuthele abasingathi e- I-MediaTemple. Imvamisa, lapho ubhalisela ipulatifomu yokubamba uvala amaseva abo asheshayo. Njengoba uhlelo lwawo lukhula, noma kunjalo, awawashintshi amaseva ngezishesha - uvala ukusala ngemuva.
Singeze iseva yedatha. Lapho i-WordPress isebenza kwiphakheji elula yokubamba, isiphakeli sihumusha ikhodi, sikhonza izithombe futhi sisebenzisa i-database. Uma ungangeza isiphakeli sedatha kuphakheji yakho yokubamba, ungasheshisa kakhulu isiza.
Ukwenza olunye uqhekeko, sibeka zonke izithombe ku-Amazon njenge inethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe. Besisebenzisa i I-plugin ye-Amazon S3 yeWordPress kepha sengiyekile. I-plugin ibikudinga ukuthi ulayishe izithombe ku-Amazon futhi ayivumelanisanga izithombe - akukuhle.
Sisanda kusebenzisa I-W3 Inani le-Cache kusuka ku-W3Edge. Ngenkathi iqine ngendlela emangalisayo, i-plugin akuyona eyenhliziyo ebuthakathaka noma engeyona yezobuchwepheshe. Ngingancoma ukuqasha uchwepheshe ukuze ayisebenzise.
I-plugin ye-W3 Total Cache isivumele ukuthi sisebenzise i-Amazon njenge-Network Delivery Network yethu kepha i-plugin iyavumelanisa iphinde ibhale kabusha izindlela zesithombe. Lokhu kuyindlela enhle yokuyisebenzisa ngoba uma ungathatha isinqumo sokuyeka ukusebenzisa i-plugin noma i-CDN, awushiywanga ngaphandle emakhazeni. Cisha le-plugin, bese ulungele ukuhamba!
I-plugin futhi ikuvumela ukuthi amakhasi enqolobane futhi imibuzo yedatha kanye nezinye izilungiselelo eziningi. Awazi ukuthi yini ukulondolozwa kwesikhashana? Ukuze ikhasi lilayishwe, ikhasi lifunda ikhodi, lenza imibuzo yedatha, futhi likhiqize ikhasi lakho ngamandla. Lapho i-caching isetshenziswa, okokuqala lapho ikhasi livulwa, likhombisa ikhasi bese libhala okuqukethwe kufayela lokulondolozwa. Ngokuzayo lapho ikhasi livulwa, limane livule ifayela elilondolozwe okwesikhashana.
Ukusheshisa isiza sakho kunomthelela omkhulu kakhulu ekufundeni kwakho kunokuba ungacabanga. Eqinisweni, isiza sakho sihamba kancane uma usidinga ukwenza okusemandleni - lapho izinkulungwane zezivakashi zikuso. Uma ungenayo ihlelwe kahle (futhi sisasebenza kweyethu), izivakashi zivame ukuhlangatshezwa ngesikrini esingenalutho, iphutha lesikhathi, noma zimane zikunikeze ngemuva kokulinda ukuthi ikhasi lilayishe umbhangqwana imizuzwana.
Ukusheshisa isiza sakho kwenza isayithi lakho libe nobungani nakuGoogle futhi. AbakwaGoogle baqinisekisile ukuthi babeka izingosi ezisezingeni eliphezulu kakhulu. Ngaphandle kwalezi zeluleko ezingenhla, ungasebenza futhi ukunciphisa osayizi bezithombe zakho kusayithi lakho, usebenzise ukucindezelwa kwekhasi, usebenzise amanethiwekhi wokulethwa kokuqukethwe we-EC2 noma we-Akamai… futhi uhambise ukulayisha ukulinganisa nokuvumelanisa. Lokho kungena emalini enkulu, noma kunjalo!
Ngo-Apr 19, i-2011 ku-11: i-52 PM
IGood Post - Ngisanda kuthuthela eMedia Temple futhi bengilokhu ngilwa nokusheshisa isiza sami i-Anglotopia. Ngemuva kokuhamba empeleni kwahamba kancane uma kuqhathaniswa nokusingathwa kwangaphambilini kwaGoDaddy. Kusukela, ngifake i-W3 Total Cache, ngangeza i-CDN futhi ngenza ezinye izinto ezimbalwa futhi izikhathi zami zemithwalo zenza isilinganiso semizuzwana engu-9-10 manje - okuhle kakhulu ezinyangeni. Kusadingeka ithuthuke. Ngingahle ngizame ukuthola iseva ehlukile yedatha ngokulandelayo. Njengamanje ngifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi iseva ihlala isebenza njengoba ngilindele isikhukhula sezimoto esizosibekela iRoyal Wedding ngesonto elizayo.